Kenya oo ku wareersan khasaaraha weerar shalay ka dhacay Lamu – warqaat.com Information About Somali New's Today
HomeWARARKA MAANTAKenya oo ku wareersan khasaaraha weerar shalay ka dhacay Lamu
Kenya oo ku wareersan khasaaraha weerar shalay ka dhacay Lamu
January 14, 2018 Cabdi nuur WARARKA MAANTA 0
Dowladda Kenya ayaa sheegtay in Haweeney la socotay Kolonyo ka mid ah Ciidamada Kenya oo marayay Gobolka Lamu ay dhimatay kaddib markii ay weerar ku qaadeen Al-shabaab.
Taliyaha Ciidanka Booliska Kenya ee Larry Kieng,ayaa sheegay in Haweeneyda ay Gawaarida Booliska markii hore ku raacday qaab bilaash ah oo ay waddada ka sii qaadeen markii ay weerarka la kulmeenna iyada ku dhimatay.
Waxaa uu Mr Larry Kieng xusay in labo Gaari oo Booliska leeyihiin la gubay,halka 15 Askar ah oo la socotay 13 ka mid ah dhaawac iyo iyaga oo bad qababa la hayo.
Waxaa uu sheegay in aysan garaneyn halka ay qabteen labo ka mid ah Saraakiisha Booliska ee Kolonyada la socday waxaana uu ka gaabsaday in ay ku maqanyihiin gacanta Al-shabab iyo in kale.
Al-shabaab ayaa dhinaceeda sheegatay mas’uuliyadda weerarkaas oo ka dhacay agagaarka Wabiga Tana Riva,waxaana ay ku sheegeen in Kenya ay kaga gubeen gaadiid dagaal.
Al-shabab waxaa ay weerarro joogto ah ka fuliyaan Gobolka Waqooyi Bari Kenya ee Soomaalida waxaana dowladda Kenya ay sheegeysaa in Al-shabaab ay kaga adkaaneyso gudaha SOomaaliya.
Ciidamo AMISOM ah oo gaaray Dhuusamareeb
Somaliland oo raadineysa fure isgaarsiineed oo ka duwan 252
48,394 total views, 376 views today
48,394 total views, 376 views today War ka soo baxay Hay’ada Nabadsugida iyo Sirdoonka Qarank ayaa waxaa lagu sheegay in Ciidamada Amniga ay Gacanta ku dhigeen Maxkaxdii ka dambeeyasay weerarkii dadka badan ku dhinteen ee lagu qaaday […]
48,466 total views, 376 views today
48,466 total views, 376 views today Wasaaradda Arrimaha Dastuurka ee Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta qabatay munaasabad lagu daahfurayay Barnaamijka Carabiyaynta Dastuurka KMG ah oo ay ka soo qeybgaleen Wasiir Ku-Xigeenka Arrimaha Dastuurka iyo Safiirka […]
48,477 total views, 377 views today
48,477 total views, 377 views today Wareegto ka soo baxay Xafiiska Madaxweynaha Dowlad-goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam(Madoobe) ayaa Maanta oo Khamiis ah waxaa lagu Magacaabay Hanti dhowraha guud ee Jubbaland Wareegtada ayaa waxaa Hanti dhowrahaGuud ee Jubbaland […]
48,498 total views, 376 views today
48,498 total views, 376 views today Kulan socday in ka badan sideed saacadood ayaa waxa uu Turkiga ku dhexmaray Mas’uuliyiin uu horkacayay Wasiirka Gaadiidka iyo Duulista Soomaaliya Maaxamed Cabdullaahi Salaad(Omaar) iyo Mas’uuliyiinta Shirkadda Favori ee Maamusha Garoonka […]
48,533 total views, 376 views today
48,533 total views, 376 views today Taliye ku xigeenka Ciidamada Booliska Dowlad Goboleedka Galmudug Col, Cabdi Jaamac Cabdulle ayaa shaaciyay in kadib baaritaano ay sameeyeen ay heleen halkii laga soo abaabulay weerarkii lagu qaaday Xarun uu Gaalkacyo […]